Lapan’ny Fitsarana ao Betroka: ho vita amin’ity volana ity ny fanavaozana ny fotodrafitrasa – Depeche TARATRA
Accueil/Politique/Lapan’ny Fitsarana ao Betroka: ho vita amin’ity volana ity ny fanavaozana ny fotodrafitrasa
Lapan’ny Fitsarana ao Betroka: ho vita amin’ity volana ity ny fanavaozana ny fotodrafitrasa
Elisé Romuald 16 septembre 2021
Ho vita mialoha ny faran’ity volana septambra ity ny fanamboarana ny fotodrafitrasa rehetra ao amin’ny lapan’ny Fitsarana Betroka, faritra Androy. Maherin’ny 80 %n’ny asa no efa vita; izany hoe ho voahaja ny fe-potoana 90 andro tokony hanaovana ny asa. Hiova endrika tanteraka izy ity, ary anisan’ny mampiavaka azy ny fisian’ny fotodrafitrasa manokana ho an’ny mpisolovava, hahafahan’izy ireo mandray an-tanana ny olona manan-draharaha ary ho fanomezana toro hevitra.
Hisy koa ny efitrano ho fakan-kevitra, azon’ny rehetra hatonina, sady napetraka manakaiky ny vavahady rahateo. Tanjona ny hampiharana ny politikan’ny ministeran’ny Fitsarana hoe fitsarana madio sy mangarahara ary manakaiky vahoaka. Anisan’ny fanantonana ny vahoaka, efa nampiharina any an-toerana amin’io ny fitsarana mitety vohitra. Efa maherin’ny 5000 ny efa nahazo kopian’ny sora-pahaterahana tao anatin’izany, nandritra ny 2 taona mahery kely izay, tao amin’ny distrikan’i Betroka.
Mandritra ny fidinana eny anivon’ny vahoaka dia sady manao karazana asam-pitsarana ny tomponandraikitra no nampahafantatra ny karazana asa sahanin’ny mpiasan’ny fitsarana. Anisan’ny efa nahavitana izany tamin’ity volana septambra ity ny tao amin’ny kaominina Isoanala. Ankoatra izay, nanao ezaka manokana nananganana tamboho manodidina ity lapan’ny Fitsarana ity ny fianakaviamben’ny Fitsarana any an-toerana, notohanan’ny fikambanana maro samihafa.
Efa vita izany tamboho iany; izay natao mba ho fiarovana amin’ny maha toerana saro-pady azy. Tafiditra anatin’ny tetikasa Prosud ity fanamboarana fotodrafitrasa ity, vatsin’ny PNUD vola, amin’ny alalan’ny tetikasa PBF.
CUA : foana ny fiantsonana manodidina an'i Mahamasina rahampitso
24 nouveaux commissaires et contrôleurs sur le marché
Appollo 21 : demandes de liberté provisoire refusées pour 4 prévenus
Sendikaly Randrana : mendrika ve ny asa eto Madagasikara?
Les députés souhaitent être représentés au sein du nouveau gouvernement
Vonona hanome tanana ny Filoha amin’ny fampandrosoana ny firenena ny Diaspora any Frantsa.
90 andro ho an’ny fiovana eny anivon’ny Fitsarana : napetraka any amin’ireo Tribonaly any Antsiranana ny rindram-baiko (logiciel) hampiasaina amin’izany.
Chine-Madagascar: “deux pays avec une longue histoire commune”
Célébration de la journée des Nations Unies : discours marqués par des messages significatifs et vibrants.
Fanabeazana mampiaty : ankizy sy tanora manana fahasembanana maherin’ny 1.200 no hampidirina an-tsekoly hatramin’ny 2023.
76e journée des Nations Unies : transformer notre monde en un monde plus égalitaire, plus juste, équitable, inclusif, durable et plus sain
ITG : mitsipaka marindrano ny fanalan-jaza ny HKFK
OMH: tsy nisy fiakarany ny vidin-tsolika eto Madagasikara
APIPA : mila tonga saina amin’ny fahadiovana ny olona mba tsy handrora mitsilany
Energie: un système anti-corruption sera mis en place
Gouvernance du secteur extractif à Madagascar : révision du code minier et application des sanctions envers les vrais coupables
Depioten’ i Morombe teo aloha Rakotomalala Lucien : ho entina any Befandriana Atsimo ny taolam-balony
Solotenan’ny firaisamonim-pirenena ao amin’ny CENI : ny 26 oktobra no tanterahina ny fifidianana